Eprel, 2021 Engineering, innovations, ọtụtụ
Site na CAD iji chịkwaa otu sọftụwia
Robotik nwere mgbagwoju anya ọkwa ọkwa nke mbụ mbipute nke Ajị ajị studioHan na Hannover Messe Industry 2021 nke ga-egosi akara ntụgharị na mmepụta robotic na-agbanwe.
Site na ịdọrọ na idobe akụkụ CAD na ejima dijitalụ dijitalụ 3D gị, a na-emepụta ngwa ngwa ngwa ngwa dị mgbagwoju anya ma ziga ya na robot mmepụta site na iji otu ịpị. Ha niile na ikpo okwu ngwanrọ nke uwa.
➔ Site na ntanetị n'ịntanetị na njikwa oge, sọftụwia ahụ Ajị ajị studioNa-ewepu ọdịiche dị n'etiti nkedo na eziokwu iji belata oge na-arụ ọrụ ma na-ebuli usoro ọrụ robotik.
➔ N'ịbụ nke e mere site na ala iji belata mkpa ọ dị maka nkà na ụzụ robot maka ekele maka ezigbo teknụzụ ejikọtara ọnụ ọgụgụ na-enweghị ezigbo koodu.
➔ can nwere ike ịgbanwe n'etiti ihe ọ bụla robot anam na ihe nlereanya na abụọ clicks chọta ezi nhọrọ maka gị ngwa, na-enweghị mkpa ịgbanwe software ma ọ bụ ikwugharị oge-eri imewe ihe aga-eme.
➔ Ọ na-ejikwa ngwa ngwa robotic dị mgbagwoju anya ma nwee ike ịnweta ụlọ ọrụ nha niile.
Ihe isi ike ruo ugbu a
Ma ígwè ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ dị oke ọnụ iji nweta mmepụta na-agbanwe agbanwe n'ezie n'ihi mgbagwoju anya nke ngwanrọ na ngwakọta. Ugbu a ọ bụ naanị ngwa njikwa ole na ole, dị ka ịhọrọ na ebe, nwere ike ịnweta ndị na-abụghị ndị ọkachamara n'ezie ma yabụ na-efu ọnụ maka mmepụta mgbanwe.
Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwa robotik na ngwa cobotics chọrọ ihe ngwanrọ dị mgbagwoju anya na iche iche, yana ọkachamara ọkachamara. Ngwaọrụ ndị a chọrọ ọzụzụ dị mkpa na ahụmịhe.
Nsonaazụ bụ na ihe karịrị 75% nke ngụkọta ego nke ịnwe (TCO) nke robot metụtara ọzụzụ na ọrụ ngwanrọ maka imepụta oke ọkọlọtọ. Na ngbanwe na-agbanwe nọmba a nwere ike ịrị elu karịa 90% TCO ma si otú a mebie ikike ịlaghachi na itinye ego na sistemụ robotic.
Ngwọta: kensinammuo ikpo okwu maka usoro niile
Ajị ajị studioBụ sọftụwia zuru ụwa ọnụ na nke kensinammuo nke na-ebelata ụgwọ mmemme robotic site na otu ụzọ n'ụzọ iri. Na Fuzzy Studio factory ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ bụla nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ akpaghị aka ngwa ngwa, ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ nke ọma, ọbụlagodi na nhazi nhazi, ịkesa na ịgbado ọkụ.
Nghọta dị mfe dị ka egwuregwu vidio
Interface A ọkọlọtọ interface niile ụdị nke ígwè ọrụ na-
➔ Nrụpụta ọrụ ụlọ ọrụ na arụmọrụ maka njikwa oge mgbatị
Fuzzy Studio ™ na-ekpuchi ọkwa niile nke ndụ mkpụrụ ndụ robotic, site na nkwadebe oru ngo, imepụta na inye ọrụ na njikwa njikwa oge, nyocha na ndozi ntanetị.
Ezubere iji mee ka ngwa ngwa na ojiji nke robotics site na ndị niile metụtara ya, site na ndị na-emepụta nnukwu ụlọ ọrụ na obere azụmaahịa, ndị na-eme ihe sistemụ na ọbụna ndị na-emepụta robot OEM.
Họrọ ígwè ọrụ ntanetị site n'ọbá akwụkwọ sara mbara
Chọgharịa nchịkọta zuru ezu nke ụdị robot sitere na ụdị nkwado ma nyo site na njirimara.
Bubata CAD na 3D faịlụ na mfe
Mee ngwa ngwa ngwa igwe eji eme ihe ngwa ngwa na mmekorita ihe omuma 3D na CAD. Formatsdị akwadoro: karịa usoro 40 gụnyere ụlọ ọrụ CAD STEP na IGES.
Chọta ogwe aka ngwụcha ngwa ọrụ
Họrọ site na otutu isi ihe eji emeputa ihe ma obu mbubata ngwa ahia. Ngwaọrụ niile akwadoro bụ plọg ma kpọọ dakọtara.
Mepụta ma gbanwee usoro ụzọ ngwaọrụ
Enweghị usoro mgbagwoju anya nke koodu ma ọ bụ usoro nhazi. Anya rụọ ngwá ọrụ ụzọ. Gbanwee trajectories na ezigbo oge wee hụ mgbanwe na 3D.
Akpaghị aka ọgbọ nke trajectory site dọrọ na idobe
Dọrọ na dobe ihe 3D CAD n'ime imewe na algorithms nke ọma ga-emepụta ụzọ ọrụ na-akpaghị aka na-ezere nkwekọrịta, ịchekwa oge, ịbawanye arụmọrụ na ịkwalite nchekwa. Oge ahia oge ị ga-eji nlezianya rụọ ọrụ na ntanetị ole na ole.
Mepụta usoro zuru oke na-enweghị koodu
Hazie ụzọ ngwaọrụ, ngwaọrụ, ihe mmetụta, ma mekọrịta I / O. Enweghị mkpa ide koodu.
Gbanwee ígwè ọrụ na-arụ ọrụ
Ekele maka algorithms nke ndị nwe ya, ndị ọrụ nwere ike ịgbanwe n'etiti ígwè ọrụ ntanetị na pịa abụọ na imewe ahụ iji chọpụta nke ziri ezi maka ọrụ ha. All trajectories na Filiks na-akpaghị aka recalculated na incompatibilities nwere ike mfe gbazie.
Otu pịa wụnye
Ekele maka algorithms na-achịkwa njikwa na ezigbo oge, "ihe ị hụrụ na ịme anwansị bụ ihe ị ga-enweta n'eziokwu." Enwere ike itinye ngwa zuru ezu na otu ịpị na robot na-emepụta ma mechie ọdịiche dị n'etiti ịme anwansị na eziokwu. A na-enyocha usoro ma gbanwee ozugbo na ozugbo.
Banyere Fuzzy Logic Robotics
Robotik nwere mgbagwoju anya O sitere na ulo oru nyocha ihe omimi nke France na ndi otu ndi okacha amara nke French-American guzobere ya ma hu uzo ohuru nke ichikota ma ghazie ihe omuma nke usoro ihe omuma. Ekele dịrị onye ahịa ochie na ụlọ ọrụ na-ege ntị, ndị guzobere mepụtara ụzọ ọhụụ ọhụụ ka ndị ọrụ na-enweghị uche wee nwee ike ịmekọrịta, jikwaa na mmemme nke ígwè ọrụ nrụpụta maka ngwa dị mgbagwoju anya nke robot ọ bụla rụrụ. Ahụmịhe ha nyere ha ohere ịfefe ihe ọhụrụ a na ụlọ ọrụ.
Site na Geofumadas obi dị anyị ụtọ iwetara gị ozi niile metụtara ụwa ụwa. N'okwu a, Fuzzy Logic Robotics na-egosi ihe ngwọta nke ga-akwado usoro njikwa data CAD na njikwa oge nke robots. Obi abụọ adịghị ya na nke a na-eme ka anyị bịarukwuo nso na ihe anyị chọrọ na mgbanwe mgbanwe nke 4 nke ụlọ ọrụ, ebe usoro na-akpaghị aka na ihe ndị dị mkpa na -emepụta maka njikwa oge ka mma. Ebumnuche Fuzzy Studio bụ ịkwado mgbanwe na-esote na igwe na-arụ ọrụ na robotic site na idozi nsogbu na ịgbanwe ụzọ ndị mmadụ si emekọrịta ma jiri robot. Anyị na-akpọ gị òkù ileta Fuzzy Logic Robotics webụsaịtị maka ozi ndị ọzọ kpọtụrụ ha na ryan@flr.io anthony.owen@flr.io. Anyị ga-amata banyere mmalite nke ngwọta a iji nye gị nkọwa niile nkọwa mbụ.
Previous Post«Previous IMARA.EARTH mbido nke na-atụle mmetụta gburugburu ebe obibi
Next Post ESRI Venezuela na Edgar Díaz Villarroel maka mbipụta 6 nke TwingeoNext »